Itoophiyaa: Rakkoo bilbilaafi interneetii Lixa Oromiyaa irratti Itiyoo-Telekoom maal jedhe? - BBC News Afaan Oromoo
Guyyoota shanan darbaniif kutaalee Lixa Oromiyaarraa interneetiin adda cituu jiraattonni ni dubbatu.
Akka namoonni jedhanitti 'Mobaayil daataafi Wifi'n' hin hojjetu, bakka tokko tokkottimmoo bilbillis hin hojjetu.
Dhimma kanarratti BBCn kan dubbise Dubbi Himtuu Itiyoo Telekoom Aadde Carar Akililuu yaada kennuu akka hin barbaanneefi yeroo gabaabaa keessatti dhaabbatichi ibsa akka kennu himan.
Tarkaanfiin interneetiifi bilbila cufuu fudhatame rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa keessatti mudataa jiruun walitti hidhamiinsa qabaafi hin qabuu wanti adda ba'e hin jiru.
Kutaaleen lixa Oromiyaa erga waldhibdeen miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo bosonatti hafanii traniifi mootummaa gidduutti uumamee nagaa hin arganne.
Keessattuu erga bulchiisi komaandi postii labsamee daranuu dararamaa jiraachuu jiraattonni dubbatu.
Bara 2019 keessa Itoophiyaan wayita qormaati biyyoolessaa ga'uufi waldhibdeen biyyattii keessatti mudatu irra deddeebiin interneetii cufaa turte.
Dhaabbati mirga walabaan interneetii argachuu irratti hojjetu 'Net blocks' Itoophiyaan tajaajila interneetii guyyaa tokko adda cituun yoo xiqqaate Doolaara Ameerikaa miiliyoona 4.5 dhabdi jechuun tilmaameera.
Lixa Oromiyaarraa bilbilliifi interneetii maaliif uggurame?
Kutaaleen lixa Oromiyaa irraa tajaajilli interneetiifi bilbilaa adda cituufi rakkoon nageenyaa uumamee akka jiru gidduu kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasummaa ta'eera.
BBCn waan Godinaalee Wallaggaa lixaa keessa jiru adda baafachuuf hedduu ifaajaa turullee, bilbilli kallattiis ta'e interneetiin tajaajila kennaa waan hin jirreef odeeffannoo guutuu argachuu hin dandeenye.
Jiraataan magaalaa Naqamtee tokko akka nutti himanitti ''Mobaayil daataas ta'e Wifi'n erga hojjechuu dhiisee bubbuleera. Namoota teelee keessa hojjetanis gaafachuu yaalleerra. Garuu isaanis hin beeknu nuun jedhan.''
Yeroo amma keessa jirru keessatti interneetii fi bilbila malee socho'uun gonkumaa hin danda'amu kan jedhan jiraataan magaalaa Naqamtee kun ''Barataan carraa ittiin fooyya'u barbaaddachuuf, hojjetaan hojiisaa saffisiisuuf, walumaa galatti hawaasi akka odeeffannoo argatee haala biyyaa fi addunyaa hubatuuf interneetiin bu'uura ta'uun eenyu jalaayyuu dhokataa miti,'' jedhan.
''Anumti mataan koo interneetiin kun hanga Roobiitti hin deebi'u taanaan wanti na duraa badu hedduudha. Iskoolaarshiippii an guutuuf ture yeroon itti xumuramu Roobii dhufutti. Yoo interneetiin jiraateedha kanan guutee xumuruu danda'u. Utuma hojiirra jirruu nurratti bade. Sababni isaa maal akka ta'es hin beeknu.''
Jiruu fi jireenyi keenya interneetiidhaan walitti hidhameera kan jedhu jiraataan kun tajaajilli tasa waan nurraa addaan citeef harka marannee taa'aa jirra jedha.
Jiraataan magaalaa Shaambuu interneetiin erga badee guyyaa afur ta'uu fi bilbiillis darbee darbeeti malee yeroo baay'ee akka hin hojjenne dubbata.
''Interneetiin hin jiru taanaan waa'ee haala biyyattiiyyuu baruun hin danda'amu. Yeroon kun ammoo yeroo itti irruma caalaa waa'ee biyyaa quba qabaachuun nurra jiraatuudha.'' jechuun dhiibbaa isaanirra ga'aa jiru ibsa jiraataan kun.
Kutaan Wallaggaa bulchiinsa Komaandi Postii jala erga galee bubbuleera. Sababa kanaan sochiin uummataa, bilbillii fi itti fayyadamni interneetii murtaa'aa fi kan yeroo mara to'atamuudha jedhu jiraattonni dubbisne.
Jiraataan magaalaa Naqamtee kun akka jedhanitti ''Dhimmi kun haaraa miti. Erga bulchiinsa Komaandi Postii jala gallee interneetiin inuma bada. Ammas kanuma shakkina. Naannoo keenya kanatti waanta ta'u nuti hin beeknu. Tasuma murtiin darba.''
Rakkoon nageenyaa kan duraaniirra hammaataa ta'e godinaalee kunneen mudatee akka jirus barreessaa jiru.
Godinaalee Qellem Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaa keessatti tajaajilli interneetii fi bilbilaa si'ataa akka hin taane rakkoo nageenyaa naannawa kana keessa jiru adda baafachuuf wayita bilbilaa turretti adda baafachuu dandeenyeerra.
Jiraattonni godinaalee kunneenii nageenyasaaniif yaaddoo akka qabanii fi rasaasa qaamolee lamaan; jechuunis qaama hidhatee bosona jiruu fi humna nageenyaa mootummaa nageenya eegsisuuf garas bobba'aniin ajeeffamaa jiraachuu irra deddeebiin nutti himaa turan.
'Qondaaltota Teelee sadarkaa biyyaatti jiraniin kan murtaa'eedha'
Oduu tajaajilli interneetii fi bilbilaa adda cituu ilaalchisuun rakkoon maal akka ta'e adda baafachuuf Itiyoo Telekoom fi kan damee Lixa Oromiyaatti bilbillus milkaa'uu hin dandeenye.
Akka namni kun jedhanitti murteen kun tasa kan raawwatee fi qondaaltota teelee sadarkaa biyyaatti jiraniin kan murtaa'eedha jedha.